Ihe ịhụ na ime na Jordan | Akụkọ Njem
Ihe iji hụ ma mee na Jọdan
Susana Garcia | | Jordan, Petra, Ihe ị ga-ahụ, njem, Asia njem
Jordan Ọ bụ akụkụ nke Middle East ebe njem na-eto na iri afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụkwa ebe nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye, ihe karịrị nnukwu obodo Petra, nke pụtara na ihe nkiri Indiana Jones. Naanị ya bụ ihe mere ị ga-eji gaa mba ahụ, mana eziokwu bụ na enwere ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ.
Jordan bụ akụkụ nke Ala Nsọ ahụ nke dị na Bible, na ya akụkọ ihe mere eme sara mbara nke ukwuu, nke mere na e nwere ọtụtụ mkpọmkpọ ebe na ihe ndị e wusiri ike gbasasịa gburugburu obodo ndị ahụ nke dị ọtụtụ narị afọ na narị afọ. Na mgbakwunye, ọ nwere oghere dị egwu dị egwu, dịka ọzara Wadi Rum. O doro anya na, a oké set iji kwadebe njem jupụtara na mmetụta uche na ihe ijuanya.
1 Petra nkume obodo
2 Ebe Baptism nke Betani
3 Ọzara mara mma nke Wadi Rum
4 Ebe nchekwa Nature Dana
5 Ebe nchekwa nke Amman
6 Sa ahụ n’Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ
7 Mee ka Moses n ’Ugwu Nebo
8 Hụ Mozis nke Madaba
9 Rome oge ochie na Jerash
Petra nkume obodo
Anyị malitere na ihe ga-fọrọ nke nta ka ihe mere anyị ga-aga Jọdan, na ọ bụ banyere ịhụ Jehova Obodo Petra, nke emere na nkume n’elu oke nkume ahu. Achọpụtara obodo a na 1812 site n'aka Johann Ludwig Burckhardt, wee rue mgbe ahụ ọ bụ obodo furu efu, nke ghọrọ akụkọ Bedouin. Obodo a, nke ndị Nabataea wuru, malitere kemgbe ọtụtụ puku afọ, o nwekwara ebe ndị fọdụrụ nke ndị Rom biri na ya.
Ebe mmalite bụ obodo Wadi Musa, ọ na-atụ aro ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ọwụwa ọwụwa, mgbe nkume tụgharịrị oroma, ma ọ bụ n'oge ọdịda anyanwụ, mgbe ọ ghọrọ pink. The Siq na-ruru site na ọmarịcha, iji mee ka anyị na ụlọ nsọ ahụ na anyị niile hụrụ na akwụkwọ ozi, ndị Khasné ma ọ bụ akụ. Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịhụ ili ndị eze na ụzọ nke nwere usoro nke na-eduga El Deir, ma ọ bụ ebe obibi ndị mọnk.
Ebe Baptism nke Betani
Na Osimiri Jọdan, na elu Bethany, bụ ebe e chere na otu ihe ahụ Jesus Christ ama enịm Jesus Christ baptism. Mpaghara a enweghị mmiri ugbu a, mana ogologo oge gara aga, osimiri ahụ mepụtara ọdọ mmiri na mpaghara a, ebe e mere ọtụtụ ndị baptizim. Obi abụọ adịghị ya na ebe a bụ ebe ndị ahụ kwere ekwe ga-aga, ebe ọ bụ na o nwere mkpa miri emi n'okpukpe.
Ọzara mara mma nke Wadi Rum
Wadi Rum bụ otu n'ime ọmarịcha ọzara na mbara ala, nwere ọdịdị ala nke yiri ka e si na Mars wee nwee oghere buru ibu nke na-egosi ịdị ukwuu nke okike. Ọzara a dị n'etiti Petra na Aqaba, ma na-enye gị ohere ịme ụfọdụ ọrụ. Enwere ike iji ya gaa 4 × 4 ma ọ bụ jiri kamel, ihe ka mma. I nwekwara ike ihi ura n’ime ulo ntu nke di n’ime etiti ozara, dika ndi Bedouins.
Ebe nchekwa Nature Dana
Ọ bụ ọdụdụ ala kachasị ukwuu na Jọdan, ezigbo mpaghara okike echekwara nke bara uru nke ukwuu. Enwere ọtụtụ ọrụ ị ga-atọ ụtọ na ya. Enwere ụzọ ụkwụ na-abanye na ndoputa site na canyons, ị nwedịrị ike ịgbazite ndị nduzi sitere na mpaghara iji nwee ọmarịcha ụzọ na-atọ ụtọ. Reserve Guest House na-eme ụfọdụ ọrụ, gụnyere ịga na ili Nabatean ma ọ bụ obodo Ottoman.
Ebe nchekwa nke Amman
Mgbe anyị rutere na Jọdan, anyị ga-anọ n'isi obodo ahụ, tupu anyị agawa ebe ọ bụla, ọ dị mma ịkwụsị na nnukwu ụlọ elu. Ọ bụ otu elu nke otu ugwu nta ya, ma nwee ụfọdụ mkpọmkpọ ebe dị mkpa nke na-agwa ọtụtụ ihe banyere akụkọ ihe mere eme nke obodo. N'ime ya anyị nwere ike ịhụ Templelọ Nsọ Rome nke Hercules, obí Umayyad yana echiche iji nwee ọ enjoyụ n'echiche nke obodo ahụ na-ekwo ekwo.
Sa ahụ n’Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ
Ahụmahụ a na-atọ ụtọ chọrọ ka onye ọ bụla na-aga Jọdan biri, Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, nke bụ n'ezie ọdọ mmiri, nwere nnu dị elu karịa oke osimiri, ọ bụ ya mere nọo n'elu mmiri ọ bụ ihe dị nnọọ mfe. Ma ọ bụghị naanị nke a, mana ọ bụkwa nnukwu spa dị n'èzí, yana gburugburu ya enwere ọtụtụ ebe ịnọ ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ahụmịhe izu ike zuru ezu.
Mee ka Moses n ’Ugwu Nebo
Ugwu Nebo putara ihe dika Chineke ji eme ya gosiri Mozis Ala Nkwa ahụ, na omenala a ma ama mere nke a na Mt. A na-ekwu na ọ bụkwa ebe Mosis ikpeazụ zuru ike na ili ya. Ebe okpukpe nwekwara ọdịda anyanwụ mara mma.
Hụ Mozis nke Madaba
Na obodo Madaba ị ga-ahụ ụfọdụ n'ime mosaics Byzantine echekwara nke ọma na Middle East niile. Ha nọ na christian-orthodox ụka nke St. George, ebe anyị na-ahụ ihe ga-abụ maapụ nke Ala Nsọ.
Rome oge ochie na Jerash
Jerash nwere ihe omumu ihe ochie echekwara nke ọma site na obodo Rom oge ochie, maka ndị akụkọ akụkọ ahụ na-enweghị ike iguzogide ebe ndị a. N'agbanyeghị ala ọma jijiji na nsogbu ndị ọzọ, gụnyere agha, ịbụ ndị e liri, ma chọpụta naanị narị afọ ole na ole gara aga, ewetala anyị ya n'ọnọdụ dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Petra » Ihe iji hụ ma mee na Jọdan
Shibam, obodo ochie nke nwere ụlọ
Osimiri kacha mma na Marseille